Royal Mail ukusika 1,600 imisebenzi - Izindaba Rule
Royal Mail ukusika 1,600 imisebenzi
Main opharetha leposi Royal Mail ngoLwesibili iveze kuhlelwe ukuba imbazo 1,600 imisebenzi ngaphansi fresh izindleko-cutting ukushayela izinyanga eziyisithupha ngemva kokuba iqembu lase ngokwengxenye ezizimele.
Royal Mail esitatimendeni ukuthi iningi imisebenzi ukuya zaziyoba ukuphathwa, kungekho abasebenzi kwezidingo yokulahlekelwa izikhundla zabo. Wanezela ukuthi izodala “300 izindima entsha noma ngcono”, okubangela ukulahleka inetha 1,300 imisebenzi.
Izinguquko kulindeleke ukuba akhulule saminyaka izindleko imali azungeze £ 50 million, isho kanje.
executive Royal Mail abakhulu Moya Greene uthe ukusikeka yayidingeka ngenjongo yezinto inkampani “ukuze ukuncintisana ngempumelelo in izinhlamvu namaphasela izimakethe”.
Uhulumeni ngonyaka odlule bathengisa off ezingaphezu kwesigamu Royal Mail kodwa Kusukela ngaleso sikhathi liye icala amalungu ePhalamende ukuphikiswa athengiselwe inkampani futhi elishibhile emva amasheya ayo spiked ngemva flotation.
Azimele kwakhiwa yomkhankaso sokusebenzisana sika slash isabelomali kusilela isizwe sika. Ukumelana ushintsho lobunikazi, Inyunyana abaphathi baphikisa ngokuthi manje amakhasimende ethola isevisi sibi kakhulu.
Uhulumeni eside wagomela ukuthi azimele ngokwengxenye uyovumela Royal Mail umuntu abe nenkululeko yokuphinde ukukhulisa capital, qhubeka wesimanje futhi bahlangabezane iyachuma Isasasa lokuthengwa shopping online yakha parcel traffic.
Lesi sihloko, Royal Mail ukusika 1,600 imisebenzi, is yedlanzana kusukela AFP futhi posted lapha nge imvume. Imininingwane 2014 AFP. Wonke Amalungelo Agodliwe
19385	1 Uhulumeni balance isabelomali, azimele, Royal Mail
← Enye Winner Lotto credits Fortune Amakhukhi Fukushima amanzi decontamination system phansi →